Antilles : Eo an-dalam-pitadiavana ny vahoaka Karaiba · Global Voices teny Malagasy
Antilles : Eo an-dalam-pitadiavana ny vahoaka Karaiba
Voadika ny 29 Mey 2018 4:26 GMT
(Marihina fa tamin'ny 28 Jona 2009 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nanomboka hatramin'ny fiandohan'ny taona 2009, nanontany tamin'ny fomba samihafa ny momba ny mari-panondroana azy ireo, ny vako-pireneny sy ny zavatra iainany amin'izao fotoana izao ny Indiana Tandrefana. Nanolotra ny hetsika manambatra ny fifandraisana ara-tsosialy, ny tetikasa ara-tantara ary ny arkeolojika miaraka amin'ny fikarohana ny mari-panondroana ny bilaogy Martinikana Kintamingo Ema. Mitondra ny lohateny hoe “Kintamingo Ema, an-dalam-pitadiavana ny razambenay”, ity tetikasa ity izay natomboky ny Fikambanana Karisko, fikambanana iray natokana ho an'ny fifandraisana ara-tsosialy, araka ny hazavaina ato :
Ireo tanora avy ao amin'ny foibem-pifandraisana ao Sainte-Marie no nandray soa tamin'ny fampiofanana.
Nanovo fahalalana sy traikefa avy amin'ny mponina ao Karaiba izy ireo, nianatra ny fomba hananganana ny lakana ary nandeha niala tao Martinika nankany Antigua. Nandray anjara tamin'ny fanamboarana ny Kanawa (teny ao an-toerana milaza ny lakana) ny tanora maro izay nitady asa sy fampiofanana mialoha ny hahatongavana tamin'ireo nosy ireo hatrany le Prêcheur any Martinika. Vetivety dia lasa toerana fanamboaran-dakan-dehibe ilay toerana fandraisana ara-tsosialy, izay nampiasana ny fahaiza-manaon'ny tompotany nentim-paharazana tamin'ny fananganana ity lakana lehibe ity. Manome ny antsipirihany bebe kokoa momba ny halehiben'ilay lakana ity fanehoan-kevitra tao amin'ny lahatsoratra CocoNews ity:
Milanja mihoatra ny 1 taonina (foana) ny kanawa , 18 metatra ny halavany ary miisa 27 ny mpamohy azy.
Namoaka ireo sary tao amin'ny toera-panorenana ny mpikambana iray tao amin'ny ekipa ary nitanisa ireo dingana miisa efatra tamin'ny fomba nananganana ny Kanawa izy: ny fanapahana ny hazo, ny fitaterana ny vata-kazo, ny fanomanana ny tapany ambony ary farany ny fandavahana ny tao anatiny. Ity ny andian-tsary mampiseho ireo dingana tamin'ny famokarana.
Manolotra ny tetikasa ho an'ny mpamaky azy ny CocoNews Guadeloupe, ary mamoaka ny zotra nalehan'ny lakana:
Toy izao manaraka izao ny zotran'ny dia: niala tao Prêcheur any Martinika ny 21 Mey ary niverina tany Prêcheur ny 1 Jona, rehefa avy nijanona tany amin'ireo nosy Karaiba any Dominika, Saintes, Guadeloupe (Basse-Terre sy Grande-Terre avy eo) ary Antigua. Olona miisa telopolo no nanao ny dia, anisan'izany ny mpahay tantara, ny mpanao fanatanjahantena, ny mpandinika ny fiarahamonina ary ny mpanoratra, saingy nisokatra ihany koa ho an'ny olona rehetra izay liana tamin'ny tetikasa ny fandraisana anjara. Manome ireo lisitry ny mpandray anjara rehetra ity lahatsoratra ity.
Ankoatra ny lafiny ara-tantara sy ny fifandraisana ara-tsosialy, nanana fiantraikany lehibe teo amin'ny fahatsiarovana sy ny fahatsiarovan-tena ity tetikasa ity. Toy ny nitanisain'ny CocoNews ny iray tamin'ireo tanjon'ny tetikasa :
Ny fanokafana vonjimaika sy ara-pitaovana indray ny lalan'ny fitaterana an-dranomasina fahiny no tanjon'ny KYTANGOMINGO EMA , …
Fa ny fomba tsara indrindra hamantarana ny antony nanosika ity tetikasa ity dia ny famakiana ny tantaran'ny zavatra niainan'ny mpandeha sy ny mpivoy lakana :
Tena traikefa nisy dikany lehibe amin'ny resaka maha-olona ho ahy ny dia Martinika-Antigua. Ny fahitako ireo nosy Karaiba ho toy ny razambentsika Amerindiana sy ny nahatsapako ny fotoan-dehibe tamin'ny fahatongavan'izy ireo tany amin'ny tany tsy fantatra
Nanan-danja ho an'ny maro ny fisafidianana ny ekipan'ny tetikasany amin'ny taona hoavy ny fahombiazana tanteraka tamin'ity hetsika ity : mankany Pôrtô Rikô amin'ny alàlan'ny kanawa.